Moise Caicedo Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
John McGinn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Moise Caicedo Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Ihe omuma anyi nke Moises Caicedo na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ndu na ndu nke onwe.
Na nkenke, anyị na-egosi akụkọ ihe mere eme nke ndị egwuregwu bọọlụ Ecuador. Lifebogger malitere site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama dị ka ebugharị maka ìgwè. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị Moise Caicedo's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Moises Caicedo Life Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye Ecuadorian Superstar in making. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ Moises Caicedo, nke na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Moises Caicedo Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na - ebido ebido, aha ya bụ 'Moi'. Moises Isaac Caicedo Corozo mụrụ na 2nd ụbọchị nke ọnwa 2001 na obodo Santo Domingo na Ecuador. A mụrụ ya na ndị nne na nna yiri ka ha karịrị afọ 60.
Zute ndị nne na nna Moise Caicedo.
Ezigbo ezinụlọ Moise Caicedo:
Moi bụ bonafide Ecuadorian. N'ezie, site n'ile nwa anyị anya, ọ bụ onye Africa karịa onye Spanish na-asụ South-America. N't kweghị? Anyị na-anabata arụmụka maka ma ọ bụ megide nkwupụta a na igbe igbe.
Moises Caicedo Afọ na-eto eto:
Onye Etiti ahụ tolitere n'obodo amụrụ ya. Agbata obi o tolitere dịtụ ntakịrị n'ihi ọnụnọ nke ọtụtụ ndị omempụ. Ma, ezinụlọ ya enweghị ihe ọzọ ha ga-eme ma ọ́ bụghị ibi ebe ahụ.
N'ịbụ onye tolitere n'obodo ahụ, Moi hụrụ football n'anya ma na-egwuri egwu n'ubi na-enweghị ahịhịa. Ọchịchọ nwata ya bụ iyi Independiente del Valle Jersey. Ya mere, ọ na-egbu ikpere ya ugboro ugboro n'abalị iji kpee ekpere ka Chineke nyere ya aka imezu nrọ ya.
Moises Caicedo toro na Santo Domingo na Ecuador.
Moises Caicedo Ezigbo Ezinụlọ:
Ànyị kwuru na midfielder anaghị enwe oge nwata? Mmepe ahụ abụghị ihe jikọrọ ya na eziokwu ahụ bụ na o si n'ezinụlọ ndị dị ala. Ndị nne na nna Caicedo nwere ike ịnye ya akpụkpọ ụkwụ bọọlụ mana ha nwere ọtụtụ ịhụnanya maka ya.
Etu otu bọọlụ si bido maka Moises Caicedo:
N'adịghị ka ihe ọmụma na-ezighi ezi nke gbasaa, ọrụ nwa anyị amaliteghị na Independiente del Valle. Ya na Espoli na oyi akwa Colorados SC tupu ya abanye na Los Negriazules mgbe ọ bụ 13.
Afọ Ndị Moise Caicedo na Afọ Nlekọta Ọrụ:
Oge Moi na agba ojii na blu ya siri ike. N'ezie, ọ gbalịsiri ike ịnagide. N'oge ụfọdụ, ọ kpọrọ nne ya ka ya na ya nwee mmekọahụ n'ebumnuche nke ịlaghachi ụlọ.
N'ụzọ dị mma, ọ natara ndụmọdụ dị mma site n'aka onye nhazi ọzụzụ Miguel Ángel Ramírez bụ onye gwara ya na ọ bụ ihe nkịtị ịda mba mana nnọgidesi ike na-emeri ihe niile. Ndụmọdụ ahụ nyere Caicedo ọtụtụ ihe dị mma ka ọ na-ebili n'ọkwá ya na anya ya ka ọ bụrụ ụdị kachasị mma nke onwe ya.
Moises Caicedo n'oge ọ bụ nwata na Independiente del Valle.
Moises Caicedo Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
You mara na onye ọkpụkpọ ọsọ a na ndị otu ya meriri Copa Mitad del Mundo wee merie Real Madrid na asọmpi Adidas Generation Cup? Ọ na-achịkwa ya n'akụkụ mmeri megide River Plate na njedebe nke 20 Libertadores.
Mgbe Caicedo mere mmalite ya maka Los Negriazules na Ọktoba 2019, ọ maghị na ọ nọ na nso ịghọ onye ama ama. N'ime ọnwa ndị sochirinụ, ọ dọọrọ uche ya ma kpọọ ya Akụkụ Ecuador-Kante, akụkụ-Pogba site ndi oru nta akuko na ndi nwere mmasi.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ na-egosipụta egwuregwu ya mgbe Paul Pogba na N'Golo Kante.
Moises Caicedo Biography - Bilie Iji Mara Aha Akụkọ:
Kpakpando bọlbụ bụ anụ ọhịa dị nso na ama ama mgbe ọ gbara akwụkwọ maka ndị otu mba Ecuador na 1-0 2022 FIFA World Cup na-efu na Argentina na 9 October. N'egwuregwu nke abụọ ya, Caicedo nwetara ihe mgbaru ọsọ mbụ na 4-2 ụlọ meriri Uruguay na 13 October 2020.
Site na Ebumnuche ahụ, Moi banyere n'akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dị ka onye ọkpụkpọ mbụ amụrụ na puku afọ nke atọ ka akara akara na CONMEBOL World Cup Qualifying. N'oge a na-ede edemede a na Moises Childhood Akụkọ na akụkọ ndụ ya, akụkọ akụkọ nwere ya - Manchester United 'ruru nkwekọrịta' ịbanye Moises Caicedo.
Fans nke Red Devils anabatala ya na Old Trafford.
Ndị Reds nwere okwukwe na ikike ya iji dochie anya ha Paul Pogba onye nọ na nso nso ịhapụ Old Trafford. Anyị kwenyere na Caicedo nwere ihe ọ ga - abụ ịbụ Premier League Star wee rụọ ọrụ ebube na Akụkụ Bekee.
Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Moises Caicedo Girlfriend?
Nwa anyị nwoke nwere obi ụtọ hụrụ onye ziri ezi n'anya. Enyi nwanyị ahụ aha ya bụ Paolita. Ọ dị ọcha na Caicedo na-ele ya anya dịka otu n'ime ihe kachasị mma mere ya. Dị ka ya si kwuo:
“Ezigbo enyi m nwaanyị dị m mma. Ọ hụrụ m n'anya ma na-akwanyere m ùgwù. ”
Iji ghọta oke Caicedo hụrụ enyi ya nwanyị n'anya, enwere post nke lovebirds na njikwa Instagram ya. Foto a nwere nkọwa - ka Chineke gọzie mmekọrịta anyị. O nwere obi uto ichota onye kwesiri ya ma anyi chokwara ha ihe kachasi nma.
Moises Caicedo na enyi ya nwanyị, Paolita.
Moses Caicedo Ndụ Ezinụlọ:
Dị ka ọnụ ọgụgụ dị mma nke ọgụgụ isi nke egwuregwu bọọlụ, ịrị elu na ebumnuche Moi na egwuregwu ahụ nwere nzube ka ukwuu. Anyị na-akpọ ya ezinụlọ. Lelee eziokwu banyere ezinụlọ Midfield. Ọzọkwa, anyị ga-ewetakwa eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya ebe a.
Banyere Moises Caicedo Ndị nne na nna:
Amabeghị nne na nna Moi aha ha. Agbanyeghị, aha ha na-ebu ha ụzọ. Afọ atọ gara aga, onye ọkpụkpọ ahụ kwere nkwa ime ka ha nwee obi ụtọ na ya. N'ozuzu, o mezuru nkwa ahụ.
Moises Caicedo na ndị mụrụ ya.
N'ịbụ ndị na-enweghị ego, ndị nne na nna Moi bara ọgaranya n'inye nkwado nwata ahụ ka ha nwee ihe ịga nke ọma. Ihe si na nkwanye ugwu a na-akwado ha na-amịpụta mkpụrụ ugbu a.
Banyere ụmụnne Moise Caicedo:
Onye bọọlụ bọọlụ bụ onye ikpeazụ n’ime ụmụaka iri amụrụ ndị mụrụ ya. O kwuru na otu n'ime ụmụnne ya ndị okenye gafere ọkwa nke Independiente del Valle. N'ụzọ doro anya, ọ ga-etirịrị bụrụ ọkachamara. N'agbanyeghị nke ahụ, ụmụnne ga-enwe obi ụtọ maka Moises maka iwetara aha ezinụlọ aha.
Moises Caicedo na ndị mụrụ ya na nwanne ya.
Banyere ndị ikwu Moises:
N'ịga n'ihu na ndụ ezinụlọ nke kpakpando bọọlụ, anyị enwetabeghị ozi banyere ndụ ezinụlọ ya. Ya mere, anyi enweghi aha nne na nna ya ochie, nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya nwoke, na nwanne nne ya ikwu ya na mmekorita dị n’etiti ha.
Moises Caicedo Ndụ Nke Onwe:
E nwere ọtụtụ ihe ịmaghị banyere ọgụgụ isi nke bọl na-akwado ike ike ya na ụdị egwuregwu egwu. Ọ bụ nwa nwoke dị jụụ, mana ọ naghị agbachi nkịtị ka a gụọ ya dị ka onye nzuzu ma ọ bụ weghachite.
Caicedo anaghị achọ ị drinkingụ mmanya na-atọ ụtọ, ọ nweghịkwa mmasị iso ndị inyom nwee mkpakọrịta. Ọ na-aga ezumike mgbe niile n'otu oge ma ọ ga-enwe ihe omume ntụrụndụ na mmasi ndị ọzọ na-eme ka ọ nwee ahụ na ọgụgụ isi.
Moises Caicedo na ezumike ya na New York.
Moises Caicedo Web Ndụ:
Ka anyị tụlee otu onye ọkpụkpọ bọọlụ si eme ya ma na-emefu ego ya bido na akụ ya. Ọ dị nwute, a na-enyocha nyocha akụ ya. Agbanyeghị, ịkwụ ụgwọ ya kwa izu € 500 bụ ihe ọ bụla ede n'ụlọ.
Enweghị ọtụtụ ihe ọ ga-eji ụdị ụgwọ ahụ. Enwere olile anya, mgbe o mechara rute na Old Trafford, ọ ga-enweta ihe karịrị ego ọ nwere ike imefu ma nwee akụ dịka ụgbọ ala na ụlọ iji chọọ akụkụ nke kpakpando dị elu.
Eziokwu Banyere Moises Caicedo:
N'ịchịkọta isiokwu a, lee ihe ị kwesịrị ịma banyere ya Ecuador's Breakthrough Star. Ha bụ eziokwu banyere ya.
Eziokwu # 1 - Salary and earnings per Seconds:
Nweta ego na ($)
Kwa Afọ: $ 26,071.
Ọnwa kwa: $ 2,172.
Kwa Izu: $ 500.
Kwa :bọchị: $ 71.
Kwa elekere: $ 2.96.
Nkeji nkeji: $ 0.05
Sekọnd: $ 0.0008
Kemgbe ịmalitere ile Moises Caicedo's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Know maara? Average nkezi Ecuador nke na-akpata 466.63 USD kwa ọnwa ga-arụ ọrụ maka ọnwa anọ na izu abụọ iji nweta ụgwọ ọnwa Moises na Independiente del Valle.
Moise bụ aha dị iche iche nke aha Mozis. Onyeisi ndị otu ahụ bụ onye Kristian. N'ụzọ na-akpali mmasị, ahụrụ ya ka ọ na-ekpe ekpere oge ole na ole tupu ọ banye n'olulu ahụ. N'ikwu nke a, ọ na-akpọtụrụ Chineke mgbe niile na Instagram maka ekpere na ekele.
Nwere ike ịhụ onye midfielder na-ekpe ekpere?
Caicedo nwere ngụkọta nke 62 nwere ikike nke 77. Ọ bụ ezie na ọnụego ahụ na-ewe iwe, ọ na-egosi oke ọrụ Caicedo kwesịrị itinye iji bụrụ ọkacha mmasị nke onye ofufe. Ọ ga-emezurịrị atụmanya.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a banyere akụkọ Moise Caicedo na akụkọ ndụ ya. Anyị nwere olile anya na ọ nyere gị mmụọ nsọ ikwere na nnọgidesi ike na-emeri ihe niile. Dị nnọọ ka Caicedo adaghị mbà n'ịgbalị ịbụ onye kachasị mma ọ ga - abụ ruo mgbe ọ nwetara aha.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna midfielder maka nkwado ha maka ọrụ ya n'okwu na omume. Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Aha zuru ezu: Moises Isaac Caicedo Corozo.
aha otutu: Moi.
Age: 19 afọ na ọnwa 3.
Ụbọchị ọmụmụ: Daybọchị 2nd nke Nọvemba 2001.
Ebe amụrụ onye: Obodo Santo Domingo na Ekwedọọ.
Ogo n'ogo: 5 ụkwụ, 10 sentimita asatọ
Elu na Cm: 178cm.
Egwuregwu Ọnọdụ: N’agbata etiti.
Ndị nne na nna: N / A
Ụmụnne: N / A
Ihe omume: Ezumike ezumike na iso ezigbo ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Ezigbo Net: N'okpuru nyochaa.
Manuel Neuer Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Bọchị agbanwee: Ọktọba 18, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 9, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 21, 2020
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 16, 2021